Al Shabaab Oo Gadiid Amisom Ay Leeyihiin Ku Gubay Inta U Dhaxeysa Beledul Aamin iyo Shalanbood Ee Gobolka Shabeelaha hoose | Jubbaland Media Online
Kolonyo Ciidamada Amisom ah ayaa Kooxda Shabaab waxey u galeen wadada ama dhabaha Xariiriya Beledul aamin iyo shalanbood goobtaasi shabaab waxey miino kula kiciyeen Mid kamid ah gadiidka gaashaman Ee Ciidamada Amisom.
Dhanka kale Boqolaal shacabka deeganadaasi Ka ag dhawaa ayaa shabaabku ku amrey inay Usoo daawasho tagaan Goobta gaariga miinada Lagula kiciyey dad weynihii goobta iskugu yimid Iyo sarakiil kal tirsan shabaab ayaa mar Qur ah Maqlay labo gantaal oo ilaa iyo hada aan la Ogeyn halka laga soo riday waxaana goobta Ku dhintey ku Dhawaad 18 ruux kuwaasi oo Iskugu jiray Sarakiil shabaab iyo dadki Rayidka Ahaa.
Maamulka deeganka shalanbood ee gobolka Shabelaha hoose ayaa warbaahinta u sheegey In 12 ruux shabaab lagu Dilay gantalka mid kamid ah uu Yahay sarkaal sare oo ay Xasuusan doonan Madaxda shabaab sida uu yiri Gudomiyaha Deegaankaasi.
Dhanka kale ma jirto wax war ah oo kasoo Baxay shabaab marka laga reebo gaariga laga Gubay amisom ma sheegin Tirada gantaalka kaga dhimatay.
Faah Faahin Wixii kasoo Kordha kala soco